Mudanayaal iyo marwooyin ... naftaada iska ilaali. Waxaad ku jirtaa inaad la kulanto xaflad ka duwan sidii hore ka hor. Ha dhihin ma aanan kuu digin. Tani ma aha qalbi jilicsan. Xisbiga wuxuu ka bilaabmaa 3 ... 2 ... 1 "Jooji" (soo saaro) - NYE Countdown for Djs, Vjs, Nightclubs 2019
Mudanayaal iyo marwooyin .... Naftaada iska ilaali. Waxaad ku jirtaa inaad la kulanto xaflad ka duwan sidii hore ka hor. Ha dhihin ma aanan kuu digin. Tani ma aha qalbi jilicsan. Xisbiga wuxuu ka bilaabmaa 3 ... 2 ... 1 "Ka qaado" (soo saaro)
SKU: DJ DROP 100 - # 81 Category: DJ Drops